Aduunyadu Intaas Ayay Isku Badashaa-Harry Kane Oo Arin Qariib Ah Saddex Sababood U Sameeyay. – Gool24.Net
Aduunyadu Intaas Ayay Isku Badashaa-Harry Kane Oo Arin Qariib Ah Saddex Sababood U Sameeyay.
Harry Kane ayaa qaaday talaabo layaableh kadib markii uu iibsaday maal galinta soo saarista iyo xayasiinta garamaanta koox Ingiriis ah laakiin saddexda arimood ee uu u sameeyay dhacdadan ayaa noqday kuwo soo jiidasho leh.
Harry Kane ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu kooxda Leyton Orient u galayo halka ay shirkadaha maaliyada oo saaraa ugu jiraan kooxaha waa wayn ee ay lacagta badan kaga helaan balse waxa uu taas badalkeeda u sameeyay arin dadka quluubtooda taabanaysa.
Aduunyadu si sahlan ayay isku badashaa waana dhacdada ka dhex muuqata ficilka Harry Kane. Kane ayaa amaah ku soo qaatay kooxda Leyton Orient xiil ciyaareedkii 2010/11 kii dhawaa laakiin muddo kooban kadib waxa uu kooxdan ka caawiyay arin layaableh.
Kooxda Leyton Orient waxay ka dhisan tahay Leton oo ku tagaal caasimada London ee carliga England waxa uu Harry Kane kooxdan amaah ku joogay muddo uu ku soo ciyaaray 18 kulan laakiin waxa uu hadda ku dhawaaqay in uu kooxdan ka caawinayo doorkii ay shirkad heshiis kula gali lahayd oo kale.
War rasmi ah oo ka soo baxay kooxda Leyton Orient ayaa lagu yidhi: “DEG DEG: Waxaanu ku faraxsanahay in aanu sheegno xidigii hore ee amaahda nagula joogay ee Harry Kane uu qaatay maal galinta soo saarista garamaanta xili ciyaareedka 2020/2021.
Kooxda horyaalka heerka afraad ka ciyaarta ee Leyton Orient ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in sponsorship-ka maaliyada kooxdeeda uu iibsaday Harry Kane oo amaah ugu hore kooxdeeda ugu joogay laakiin waxa uu Kane doonayaa in garamaanta kooxdan uu ku xayasiiyo kooxda shaqaalaha caafimaadka qaranka UK ee NHS.
Xayasiinta maaliyada kooxda Leyton Orient ee uu Harrh Kane iibsaday waxaa lagu xusi doonaa saddex sababood oo uu arintan u sameeyay oo la xidhiidha dhinaca caafimaadka iyo saamaynta farayska aduunka dilaaga ku noday.
1- Waxa uu Harry Kane lacagta badan u bixinayaa ee uu xayasiinta maaliyada kooxda Leytor Orient u iibsaday waa in uu ku xayasiiyo geesiyaasha shaqaalaha caafimaadka UK ee loo yaqaan “Geesiyada safka hore’ ee NHS.
2- Waxa uu Harry maaliyada kooxda Leyton Orient uu ku xayasiin doonaa goobta carruurta lagu daaweeyo ee Haven House Children’s Hospice.
3-Arinta saddexaad ee uu Harry Kane iibsashada soo saarista maaliiyada kooxda Leytor uu u adeegsan doonaa waa in uu ku sameeyo xayasiiyo sare loogu qaadayo caafimaadka dadka dhibrka ama maskax ahaan u xanuunsanaya.
Maaliyada kowaad ee kooxda Leyton Orient waxay kooxdani war saxaafadeedkeeda ku sheegtay qorshaha loo sameeyay waxaana qoraalka lagu yidhi: “Garamaanta kowaad waxay noqon doonaan mahad celinta geesiyaasha safka hore ee caafimaadka qaranka, halka garamaanta martida ah ay ku soo bixi doonaan Haven HouseCH iyo Mind Charity”.
Laakiin arinta cajiibka ahi waa in Harry Kane uu kooxda Leyton Orient uu dhaqaale badan ku siin doono in uu ka iibsaday soo saarista garamaanta kooxdeeda iyo xayasiisyada ku soo bixi doono inkasta oo uu kooxdan amaah ku soo qaatay waqti uu ahaa xidig aan boos haysan.
Wuu udanqaday laakin ma unuu lacag usooxareyo ayuu rabaa